आज अक्षय तृतीया, यी कार्य गर्दा हुन्छ शुभ ! - ParyatanBazar.com
आज अक्षय तृतीया, यी कार्य गर्दा हुन्छ शुभ !
वैशाख ३१, काठमाडौं । आज वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात् अक्षय तृतीया । जौको सातु र सर्बत खाएर मनाइँदै छ । यस दिन विष्णु र लक्ष्मीको पूजा गर्नुका साथै दान गरेमा शुभ फल मिल्ने धार्मिक विश्वास छ ।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार अक्षय तृतीयका दिन सूर्य तथा चन्द्रमा आफ्ना उच्च राशिमा रहन्छन् । यसकारण यो दिन पञ्चांग नहेरी पनि कुनै पनि शुभकार्य गर्न सकिन्छ । शास्त्रका अनुसार यो दिन स्वयंसिद्ध मुहूर्त हो ।
विवाह, गृहप्रवेश, पदभार ग्रहण, सुन खरिद, नयाँ सामान खरिद, सवारी साधन खरिद, भूमि पूजा तथा नयाँ व्यापारका लागि यस दिन अति उत्तम हुने विश्वास गरिन्छ ।